Indawo Enhle - 1 BR Ilungele Ukuhlala Isikhathi Eside!
Richmond, Virginia, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Chakoha
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Chakoha izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Hlala enhliziyweni yakho konke ngesikhathi sakho e-Richmond! Leli gumbi lokulala eli-1, ifulethi eliphansi le-2 lihlala endaweni yomlando nesitayela soMnyuziyamu, ibhlokhi nje ukusuka eCarytownScott's Addition, nokufinyelela kalula kwedolobha neVCU.
Iphelele ngokuhlala isikhathi eside! Thatha ithuba lezinsiza ezitholakalayo, kufaka phakathi ikhishi eligcwele, Isikhungo Sokufaneleka, Isikhungo Sebhizinisi/Sokufunda, iClubhouse, nechibi lamanzi anosawoti!
Noma ngabe uvakashele ibhizinisi noma ukuzijabulisa, uthole indawo ekahle yesikhathi sakho e-Richmond!
4.60(93 okushiwo abanye)
4.60 · 93 okushiwo abanye
I-Museum District ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu e-Richmond, enamakhulu ezindlu ezinhle, ezinomlando kanye nenqwaba yamamnyuziyamu, amabha, nezindawo zokudlela. Njengoba usabalele kuyo yonke indawo, uzothola imidwebo efanelekile ye-Instagram, izitolo ezihlukile, nezindawo ezincane ezinemfashini ukuze uhlanganyele futhi ujabule. Amabhulokhi ambalwa nje okuya e-Carytown, nokufinyelela kalula e-Scott's Addition naseVirginia Commonwealth University!